Malunga nathi-iLenda International Tradingl Co, Ltd.
Ukuphuhlisa iimveliso zobuchwephesha obuphakathi kwendalo zihlala ziindawo eziphambili ekugxilwe kuzo kwinkampani ye-LENDA.Specialize kuyilo, ukuvelisa kunye nentengiso ye-scooters zombane, i-e-bikes, ii-hoverboards kunye nee-skateboards.
Ngophuhliso olukhawulezayo lweemarike ezikrelekrele, ukhuphiswano lwentengiso luyinto eyoyikeka nangakumbi; I-LENDA iyayazi ukubaluleka kokwenza izinto ezintsha, ulawulo lomgangatho kunye neenkonzo zabathengi.
"Inzulu kwaye inoxanduva, kukwenza abathengi bancume ngolwaneliseko" yinkonzo ye-LENDA ye-tenet kwaye esinye sezizathu zokuba inkampani ithandwe kakhulu ngabathengi kunezinye iinkampani ezikwishishini. I-LENDA igxile kuphuhliso kunye nokugcinwa kweemakethi zaphesheya. Okwangoku, iimakethi ze-LENDA zaphesheya ziye zasasazeka eYurophu, eMelika, eAsia nakwamanye amazwe, zibonelela abathengi basekhaya ngemveliso ekumgangatho ophezulu. Inkampani yethu ibambelela kumbandela weshishini "Ukusinda ngomgangatho, uPhuculo ngetyala, ukusebenza ngempumelelo kwabaLawuli". Senza iinzame zokuphucula umgangatho weemveliso, itekhnoloji kunye nolwaneliseko lweenkonzo, ukudala ixabiso elingenamda kubathengi. Kwangelo xesha, iimveliso zenkampani yethu ziimodareyitha, zibekwe emgangathweni kwaye zikrelekrele kuyile ukuba zikhuphisane ngokhuphiswano, ezinganiki nje kuphela umbono ophucukayo wokuphuhlisa, kodwa ikwamele isikhokelo sophuhliso lwexesha elizayo kunye nomkhwa wayo wonke umzi mveliso wokuhlanganisa inkqubo ukuya kwisilinganiselo esithile.
Ukuhamba ngebhayisekile kwisixeko